गर्भधारणका लागि सबैभन्दा उत्तम उमेर कुन ? – " सुलभ खबर "
गर्भधारणका लागि सबैभन्दा उत्तम उमेर कुन ?
काठमाडौँ । अहिलेका युवा–युवती विवाहको विषयलाई लिएर त्यति हतार देखाउँदैनन् । यहाँसम्म कि विवाहपछि सन्तान उत्पादनका लागि पनि आफूहरुको जीवन राम्रोसँग सेटल नहुञ्जेल पर्खने र त्यसपछि मात्रै गर्भधारणको योजनामा लाग्ने गर्छन्।
यसबाट वैवाहिक जीवनमा बाधिएका जोडीलाई जीवन जिउने कुरामा महत्वपूर्ण सहयोग पनि मिलिरहेको हुन्छ। तर गर्भधारणको विषयलाई हेर्ने हो भने एउटा उमेर समूहपछि महिलाहरुमा सन्तान उत्पादनको क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ। यसले तनाव उत्पन्न गराउने छ।
उपयुक्त गर्भधारणको उमेर नाघिसकेको अवस्थामा गर्भधारण भएपनि गर्भपतन हुने तथा अन्य समस्या देखिन सक्छ।
त्यसैले कुन–कुन उमेर समूहमा गर्भधारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ त ?
२० देखि ३० वर्षसम्म
२० देखि ३० वर्ष उमेर समूहलाई गर्भधारणको सबैभन्दा उत्तम समय मानिन्छ । यो उमेर समूहमा महिलामा गर्भधारणसँग जोडिएका विभिन्न समस्या आउने आशंका अत्यन्तै कम हुन्छ ।
यो उमेर समूहका महिलाको शरीरमा सबैभन्दा बढी स्वस्थ अण्डा उत्पादन हुन्छ । जसका कारण समस्यारहित ढंगले गर्भधारण सफल रुपमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
३० देखि ३९ वर्षसम्म
यो उमेर समूहमा महिला प्रवेश गर्दैगर्दा उसको शरीरमा भएको अण्डाको संख्या कम हुँदै जाने गर्छ। महिलाको शरीमा करिब दश लाख अण्डा हुन्छ । किशोरावस्थाबाट माथिको उमेर बढ्दै जाँदा उक्त अण्डा ३ लाखमा झर्नेछ ।
यसमा ३ सयदेखि ४ सय अण्डा भने गर्भधारणका लागि सफल हुने खालका हुन्छन् । ३७ वर्षको उमेरसम्ममा मात्र २७ हजार अण्डा महिलाको शरीरमा हुन्छ । अण्डाको संख्या घट्दै जाँदा यो उमेरमा आइपुग्दा गर्भधारण गर्ने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ।
यो उमेर समूहमा महिलाले गर्भधारण गरे पनि उसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले उसको कोखमा हुर्कदै गरेका बच्चाको शारीरिक विकासमा पनि प्रभाव पार्दछ । साथै यो उमेरमा गर्भपतनको पनि उत्तिकै उच्च जोखिम हुन्छ ।
४० वर्षदेखि ४९ वर्षसम्म
एक अध्ययनअनुसार यो उमेर समूहमा महिलाले तीन महिनासम्म गर्भधारण गर्ने प्रयास गरेमा यसको सफलताको दर सात प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यदि यो उमेर समूहकी महिलाले गर्भधारण गरेपनि उसको र बच्चाको स्वास्थ्यमा थुप्रै किसिमका जोखिम आउन सक्ने छन् ।
यस्ता जोखिमहरुमा गर्भपतन, निश्चित समयभन्दा अगाडि नै सुत्केरी, बच्चाको कम तौल, बच्चा जन्मदैदेखि रोगी, जन्मिएको बच्चाको मृत्युसम्म हुने सम्भावना अत्यन्तै धेरै हुन्छ ।
यो उमेर समूहकी महिलाले गर्भधारण गरेमा ब्लड प्रेसर (बीपी) वा सुगर (मधुमेह) को समस्या आमरुपमा हुने गर्दछ । यस्तै, गर्भपतनको सम्भावना पनि दुई गुणा बढी हुने गर्दछ ।
बिहे गर्ने पुरुष खोज्दै लाइन लागे युवती
विश्वमा केहि यस्ता राष्ट्रहरु छन् जहाँ युवतीको संख्या कम भएका कारण युवकहरु बिहे गर्न पाएका
एक रात सुत्दा ६ लाखसम्म पाइने, तर पूरा गर्नुपर्छ यस्ता शर्त !
एजेन्सी– आजको समयमा जो पनि धनी बन्न चाहन्छन् । तर धनी बन्नको लागि कडा मिहेनत
म यो संसार छोड्न चाहन्छु भन्दै फेसवुकमा लेखेकी बलिउडकी यि नायीकाले सोमवार वास्तवमै संसार छोडिन्
६ वर्षसम्म पहाडमा लुक्दा भेडामा उ’म्रियो २७ किलोको ऊन ( भिडियो सहित)
‘केटू हिमाल’मा नेपाली राष्ट्रिय गान बजाइएको भिडियो पोस्ट गर्दै राहुल गान्धीले दिए बधाई